Booliska Soomaaliya oo u dabaal degey sanadguuradii 73’aad. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Booliska Soomaaliya oo u dabaal degey sanadguuradii 73’aad.
Booliska Soomaaliya oo u dabaal degey sanadguuradii 73’aad.
Munaasabado lagu maamuusayo xuska sanad-guuradii 73aad ee ka soo wareegatay markii la aas aasay ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta lagu wadaa in ay ka dhacaan qeybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya.
Maanta oo kaliya ayaa sanad kasata ayaa la qabtaaa munaasabada lagu maamuusayo xuska sanad-guurada markii la aas aasay Ciidamada Booliska Soomaaliyeed oo ah ciidankii u horeeyay ee ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo la aas aaso.
Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyeed, Jen. Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa hambalyo u diray Ciidamada Booliska Soomaaliyeed heer Federaal iyo heer maamul goboleed.
Jen. Maxamed Sheekh ayaa sheegay in booliiska Soomaaliyeed uu soo maray marxalado kala duwan, isagoo xusay in labadii sano ee u dambeeyay uu Booliska Soomaaliyeed ku tallaabsaday horumaro la taalab karo.
Ciidamada Booliska ayaa la filayaa inay soo bandhigaan dhoolatus, waxaana munaasabada sanad-guurada ka qeyb geli doona Madaxda dowladda iyo xubno ka tirsan wakiilada beesha Caalamka.
Ugu danbeyntii, booliiska Soomaaliya ayaa la aas aasay sanadkii 1943, waana ciidankii u horeeyay ee ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, waxaa lagu tilmaamaa hooyada ciidamada qalabka sida.
Previous articleSafiirkii Dalka Ruushka u fadhiyey Turkiga oo la gartey Dilaagii ka danbeeyey dilkiisa.
Next articleSwitzerland Masjid ku yaal weerar lagu qaadey oo 3 Soomaali ahi ku dhaawacmeen.